Home Wararka Soomaaliya oo lagu daray dalalka xadgudubyada u geysta caruurta
Soomaaliya oo lagu daray dalalka xadgudubyada u geysta caruurta
Warbixin buuxda ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu cadeeyay in xadgudubyada lagula kaco carruurta ku nool wadamo ay Soomaaliya kamid tahay ay yihiin kuwo si aad ah looga argagaxo. Warbixintaan oo salka ku haysa baaritaan ay Qaramada Midoobay sameeysay ayaa qaramada Midoobay ku sheegtay in ugu yaraan 19,379 carruur ah ay dhibanayaal u noqdeen xadgudubyo waaweyn oo isugu jira askarayn iyo kufsi.
Dhanka kale tirada ugu badan ee xadgudubyada halista ah waxaa laga diiwaan galiyay Afghanistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC), Soomaaliya, Suuriya, iyo Yemen. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 8,400 oo carruur ah ayaa lagu diley ama lagu dhaawacay dagaallada socda waddamadan. Ku dhowaad 7,000 oo kale ayaa loo qorey askarayn dalalka DRC, Soomaaliya, Suuriya, iyo Myanmar.